MM Movie – Page7– Welcome MM Movie
ဘိလပ်မြေထမ်းပြီး တက္ကသိုလ် ဆက်တက်ရတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက မိန်းကလေး
Woman of 9.9 Billion(2019)
Chocolate (2019) mm_sub
Welcome MM Movie
Mr Nookayya (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး ====================== IMDb 6.4/10 Action / Comedy. 2h 20m ဒီတစ်ခါတော့ အိန္ဒိယ ဇာတ်ကားကောင်းလေး တစ်ကားနဲ့ ပရိတ်ကြီးကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ… မင်းသားချော Manchu Manoj နဲ့ မင်းသမီးချော Kriti Kharbanda နဲ့ Sana Khan တို့ရဲ့ Mr. Nookayya ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပီနော်… ဇာတ်ကားကြည့်ရန် 👇👇👇👇👇 Mr Nookayya (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး ဇတ်ကားကြည့်ရန်
Posted on December 15, 2019 Author admin	Comments Off on Mr Nookayya (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Mersal (2017)မြန်မာစာတန်းထိုး ××××××××××××××××××××××× Mersal ဇာတ်ကားဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် IMDB rating 8.8/10 ရရှိထားပါတယ် သရုပ်ဆောင်များအနေနဲ့ မင်းသား Vijay,Samantha,Nithya Menon တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော သဲထိတ်ရင်ဖိုအက်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဒေါက်တာ Marran တစ်ယောက် ဆေးပညာရပ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတစ်ခုတက်ရင်း အခြားဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Arjun နဲ့မသင့်မမြတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ထို့နောက် Arjun နဲ့လက်ထောက် Anu Pallavi တို့ကို့ မျက်လှည့်ပြပွဲကြည့်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် မျက်လှည့်ပြနေစဉ် ဒေါက်တာ Arjun တစ်ယောက် အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါ…… တရားခံအစစ်အမှန်ကဘယ်သူလဲ……. နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူတွေရှိနေလဲဆိုတာ……. စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်ကားကြည့်ရန် 👇👇👇👇👇 Mersal (2017)မြန်မာစာတန်းထို ဇတ်ကားကြည့်ရန် Down ရန်
Posted on December 15, 2019 Author admin	Comments Off on Mersal (2017)မြန်မာစာတန်းထိုး
Posted on December 15, 2019 Author admin	Comments Off on Alone 2015 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Bullet Rani (Jana Gana Mana) မြန်မာစာတန်းထိုး ———————————————- 2019 . Action, Crime အညွှန်း အများလေးစားရတဲ့ ဘာသာရေးဆရာကြီးတစ်ဦးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အမှု သမီးဖြစ်သူယာဉ်မတော်တဆမှုနဲ့ဆုံးပါးသွားပြီး ခမည်းမခက်ဖြစ်သူအိမ်ကို အကျိုးအကြောင်းသွားပြောရာမှ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာပါ….။ လက်သည်ဘယ်သူလဲဆိုတာ အားလုံးသိနေကြပေမယ့် အာဏာပါဝါကြီးလွန်းတာကြောင့် ဘယ်အဖွဲ့အစည်း ဘယ်ရဲဌာနမှ မကိုင်တွယ်ရဲတဲ့အမှု… သို့ပေမယ့် ဂျာစီဆိုတဲ့ရဲမေလေးကတော့ မိန်းကလေးတန်မဲ့ အကြောက်အရွံ့ကင်းစွာနဲ့ ဒီအမှုကိုလက်ခံဖို့ရဲရဲတင်းတင်းပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…. သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်ပဲ ယုတ်ယုတ်မာမာကြိုတင်ကြံစည်ထားတဲ့ဒီအမှုကို ရဲမေလေးဂျာစီတစ်ယောက် ဘယ်လိုအကွက်ချဖော်ထုတ်မလဲဆိုတာ…. ဇာတ်ကားကြည့်ရန် 👇👇👇👇👇 Bullet Rani (Jana Gana Mana) မြန်မာစာတန်ထိုး Movie ကြည့်ရန်ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ
Posted on December 15, 2019 Author admin	Comments Off on Bullet Rani (Jana Gana Mana) မြန်မာစာတန်းထိုး
Batla House (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး
Batla House (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး ===================== (Unicode) တကယ်တော့ ဒီဇာတ်လမ်းက ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေပြုပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၃ရက်နေ့က ဒေလီမြို့မှာ ပေါက်ကွဲမှု ငါးကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း စက်တင်ဘာလ ၁၉ရက်နေ့က ဒေလီမြို့၊ ဂျမီယာနဂါးအရပ်မှာရှိတဲ့ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Batla House encounter case (Batla House ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှု) သို့မဟုတ် Operation Batla House (Batla House စစ်ဆင်ရေး) ကို အခြေခံထားတာပါ။ အဲ့ဒီစစ်ဆင်ရေးမှာ အကြမ်းဖက်သမားလို့ရဲတွေဘက်က ယူဆထားခဲ့တဲ့ Jamia Millia Islamia University (ဂျမီယာမီလ်လာအစ္စလာမ်မီယာတက္ကသိုလ်)က ကျောင်းသားငါးယောက်ကို ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးရင်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပစ်ခတ်တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်သွားတယ်။ […]
Posted on December 15, 2019 Author admin	Comments Off on Batla House (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး
1921 (2018) မြန်မာစာတန်းထို
1921 (2018) မြန်မာစာတန်းထိုး ================================== 2018 ခုနှစ်ထွက်ရှိထားပြီး အခုလောလောလတ်လတ် ရုံတင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ၁၉၂၁ ဆိုတဲ့ အိန္ဒိယ အချစ်သရဲ သဲထိပ်ရင်ဖိုကားကြီးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ – အိန္ဒိယမှ ထူးချွန်တဲ့ ပီယာနိုပညာရှင်လေး အာရွတ်ရ်ှကို သူ့ရဲ့သူဌေးက လန်ဒန်ကို ဂီတပညာသင်ဖို့စေလွှတ်ခံခဲ့ရတယ်။လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ သူ့အိမ်ကိုလည်း စောင့်ရှောက်စေရင်းနဲ့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာ အာရွတ်ရ်ှက အမှားတစ်ခုလုပ်မိသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီအမှားကြောင့် သူနေနေတဲ့အိမ်ကြီးမှာ သရဲတစ္ဆေတွေရဲ့ခြောက်လှန့်ခြင်းကို ခံရပါတော့တယ်။ သူတစ်ယောက်တည်းဒီပြဿနာတွေကြုံနေရင်းမှ တစ်နေ့သတင်းစာထဲမှာ ဝိဥာဉ်တွေနဲ့စကားပြောတတ်တဲ့ ရို့စ်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အကြောင်း ဖတ်မိတဲ့အချိန်မှာ သူ့အတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာပါတယ်။ ဘောလိဝုဒ်ရဲ့ နာမည်ကြီးသရဲကားရိုက်တဲ့ဒါရိုက်တာ Vikram Bhatt ရိုက်ကူးထားတာပါ။ သရဲကားကြိုက်သူတွေအတွက် တကယ်ကိုထိန်လန့်မှုတွေပေးစွမ်းစေမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ အသံချဲ့ပြီး အိမ်ထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းကြည့်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းမယ်ဆိုတာကိုတော့ အကြံပေးလိုက်ပါရစေ ဇတ်ကားကြည့်ရန် […]
Posted on December 15, 2019 Author admin	Comments Off on 1921 (2018) မြန်မာစာတန်းထို
Ismart Shankar -2019(မြန်မာစာတန်းထိုး)
Ismart Shankar -2019(မြန်မာစာတန်းထိုး) 2019 . Action/Sci-Fi IMDb . 6.4/10 Synopsis : မှတ်ဉာဏ်ကူးပြောင်းမှုတဲ့…. လူတစ်ဦးရဲ့ မှတ်ဉာဏ်ကို တစ်ခြားသူတစ်ဦးဆီကူးပြောင်းပေးလို့ရမယ်ဆိုရင် တစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကိုရော ကူးပြောင်းပေးလို့ရနိုင်ပါသလား…. ရှန်ကာဆိုတဲ့ လူမိုက်တစ်ယောက်…သူမလုပ်တဲ့အမှုမှာဓါးခုတ်ရာလက်ဝင်လျှိုမိရာကနေ သူ့အတိတ်မှတ်ဉာဏ်တွေထဲက ချစ်သူလေးကိုပါဆုံးရှုံးမေ့ပျောက်သွားရမယ့်အဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲကြုံရပါတော့တယ်အချစ်က ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးတယ်…. ချစ်သူကိုသတိရလို့ငိုရတယ်ဆိုတာလည်း ပျော်ရွှင်မှုပဲတဲ့ခေါင်းထဲက မှတ်ဉာဏ်တွေထဲမှာ ချစ်တဲ့သူကိုပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခါရှန်ကာတစ်ယောက်ပျော်ရွှင်မှုကိုရနိုင်ပါဦးမလား…. မှတ်ဉာဏ်ထဲကလည်းပျောက် အပြင်မှာလည်းပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားတဲ့ချစ်သူအတွက် ရှန်ကာရဲ့လက်စားချေမှုက ဘာတွေဖြစ်မလဲ…(Video Credit By Kyaw Gyi) zကားကြည့်ရန် 👇👇👇👇👇 <<< Movie ကြည့်ရန်ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ >>>
Posted on December 15, 2019 Author admin	Comments Off on Ismart Shankar -2019(မြန်မာစာတန်းထိုး)
Kavacha (2019) မြန်မာစာတန်းထို
Kavacha (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး =========================== ဇာတ်ကြမ်းကား ကောင်းမှလန်းမှ ရှယ်လေးတွေကိုကြိုက်တတ်သူများအတွက် ဒီကားလေးကိုကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ပါလို့ အရင်ပြောပါရစေ… Kavacha 2019 ‧ Thriller/Crime IMDb . 8.5/10 Review… ဘဝမှာ အခက်အခဲတွေ ကြုံလာတဲ့အခါ အရှုံးပေးကြတော့မှာလား ။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ လောကဒဏ်ကု ကြံ့ ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့အပြင် အခြားသူတွေကိုပါ ရဲရင့်စေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်မမြင်ဟီးရိုးကြီးကို မြင်ရမှာပါ ။ သူ ဟာ ရိုးသားကြိုးစားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး တရားသူကြီးတစ်ဦးရဲ့အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်နေခဲ့တာပါ။ တရားသူကြီးကလည်း သူ့ကို သိပ်ယုံကြည်တဲ့အတွက် ဘယ်မဆို အတူခေါ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ တရားသူကြီးအသတ်ခံရပြီး တရားသူကြီးရဲ့ငွေ ၁ကုဋေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ရဲတွေ ဘက်က တရားခံလိုက်ရှာပေမယ့်လည်း တရားခံမတွေ့တဲ့အပြင် အထက်ကဖိအားတွေကြောင့် သူ့အပေါ်အပြစ်ပုံချပြီး အမှုပိတ်ဖို့ ကြံစည်ပါတော့တယ် […]
Posted on December 15, 2019 Author admin	Comments Off on Kavacha (2019) မြန်မာစာတန်းထို
Drishyam (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Drishyam (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး ===================== Drishyam ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ လုံးကောက် အဓိပ္ပါယ်ကိုပြောရမယ်ဆို အမြင်တဲ့ …… ။ ဇာတ်ကားကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေကတော့ ဒီသဘောကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ် … ။ ဒီဘက်ခေတ်ဘောလီးဝုဒ် ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ဘောလီးဝုဒ်ပရိသတ်မဟုတ်သူတွေတောင် တကူးတကကြည့်ကြတဲ့ ဇာတ်ကားဆိုလို့ လက်ချိုးရေတွက်လို့ရမယ်။ ဥပမာ PK တို့3Idiots တို့လိုပေါ့။ Drishyam ဇာတ်ကားဟာလည်း ဒီစာရင်းထဲထည့်လို့ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါဘဲ။ ဒီဇာတ်ကားကို သူ့အရင်က တီလဂူ // မလယလမ် အစရှိတဲ့စကားတွေနဲ့ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးတွေက အကြိမ်ကြိမ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကျနော်မှတ်မိသလောက်ဆို ၂၀၁၃-၂၀၁၅ ဝန်းကျင်တင်ဘဲ ၃ ကားလောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု Ajay Devgan ရဲ့ Drishyam လောက် မအောင်မြင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ […]
Posted on December 15, 2019 December 15, 2019 Author admin	Comments Off on Drishyam (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Posted on December 15, 2019 December 15, 2019 Author admin	Comments Off on Application ဒေါင်းရန်